Asikho isidingo sokushisa impahla – Zuma – LIVE Express
uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, usegxeke izigameko zokushiswa kwempahla kuleli yilabo abasuke bebhikishela izidingo zomphakathi wathi zibuyisela umphakathi emuva.
uZuma ubethula inkulomo yosuku emcimbini wokugubha usuku lwenkululeko, i-Freedom Day, eGiyani, eLimpompo, ngoLwesithathu.
Utshele izinkulungwane zabantu ababefike ngobuningi ukuzothamela lo mcimbi ukuthi inkululeko ayitholakalanga mahhala. Uthi le nkululeko yalwelwa kanzima kanti futhi miningi imiphefumulo eyalahleka ukuze kutholwe le nkululeko.
“Kumele sibumbane futhi singavumeli lutho ezobeka engcupheni inkululeko nentando yeningi esayilwela kanzima. Lokhu kusho ukuthi kumele siziyeke izenzo ezibukela phansi inkululeko yethu esayithola kanzima ezifana nokuzibandakanya odlameni,” kusho uZuma.
“Isibonelo, uma ngabe abantu bethukuthele, asikho isidingo sokuthi bashise izimboni, njengoba kwenzeka kwaSithebe, KwaZulu Natali, muva nje. Ushisa imboni, unciphisa amathuba okwakha imisebenzi. Siyicela kanjani imisebenzi bese sishisha lezi zimboni okumele zisinikeze imisebenzi ngoba nje sithukuthele?,” kubuza uMengameli.
uMengameli uphinde wanxusa abantu ukuthi baqinisekise ukuthi bayazivikela izinsiza zomphakathi ezifana nezikole, imithombo yolwazi, izitimela, imitholampilo njengoba lezi zidingo zikhonela ukuthi ziphucule izimpilo zabantu.
uZuma uthi kuyathusa ukuthi abanye abantu bacekela phansi lezi zidingo kalula nje.
“Uma ubhikisha ngokuthula wenza ukuthi isikhalo sakho sizwakale, kodwa uma uba wudlame usuke usubukela phansi amalungelo abanye. uMthethosisekelo uthi ilungelo lakho kumele lihlonishwe kodwa nawe kumele uhloniphe amalungelo abanye,” kusho uMengameli.
Uphinde waxwayisa ngokuthi kunabantu emphakathini abafuna ukusebenzisa udlame nokungabuseki kwezwe ngoba befuna ukuzakhela udumo nokuthi bazakhele igama kwezepolitiki kodwa bebe bengenandaba nenhlalakahle yomphakathi.